LG weputara OLED TV nke mbu nke uwa ka Akụkọ akụrụngwa
Jordi Gimenez | | TV
Ọtụtụ bụ akụkọ na-erute anyị ntị na CES na Las Vegas n'ihi ya, anyị enweghị ike ịhapụ ihe kachasị mkpa ma ọ bụ pụtara ìhè nke mmemme teknụzụ a. N'oge a, ihe anyị chọrọ ịkọrọ gị niile bụ mmalite nke telivishọn ọhụrụ LG Akara Mbinye aka OLED nlereanya 65R9.
Nke a abụghị naanị TV ọ bụla na ụlọ ọrụ ahụ na-etu ọnụ na nke a bụ OLED TV mbụ nwere ike ịgbanye n'ụwa. O doro anya na anyị na-eche ihu ihe nlereanya LG nke na-ese onyinyo na ụda na otu ọkwa mana isi ọhụụ bụ nke ahụ A na-ezobe igwe ntinye aka nke LG bụ anụ ọhịa 65 nke anụ ọhịa ahụ na ntọala ya.
O doro anya na TV ọhụrụ a na-agbakwụnye ọgụgụ isi na 9nd ọgbọ Alpha XNUMX processor (Ọ bụ ụdị nke kachasị mma nke ewepụtara na 2018) yabụ a kwadebere ya na teknụzụ kachasị mma nke ika ahụ nwere ike ịnye n'oge a, ihuenyo ahụ dịkwa ezigbo njọ ma setịpụ ahụ na-egosi anyị ụdị ngosi dị egwu.
Ihe "R" pụtara na aha LG Signture OLED TV R ọ bụghị naanị na-ekwu maka ikike ọ nwere enrna-esi isi n’onwe ya ma tụsara ahụrenwere ike iru ya site na ịpị bọtịnụ, dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kwuo, mana ọ pụtakwara ikike "r" imepe ụlọ ọrụ ntụrụndụ ụlọ na "r" kọwaa oghere dị na ya. Nkwupụta zuru ezu nke ebumnuche nke ga-abụrịrị iru mmadụ ole na ole n'ihi na ọ karịrị karịa ọnụahịa dị elu nke taa amabeghị.
1 Viewingdị ikiri ụzọ atọ dị iche iche: Nlele Anya, Nlele Anya na Echiche Zero
Atọ dị iche iche ikiri ụdịdị: Nlele Anya, Nlele Anya na Nlele Efu
Ọ bụ maka echiche zuru ezu, nlele ntanetị na nlele emechi dị ka anyị na-ahụ na onyonyo ahụ anyị nwere karịa usoro ndị a, ma n'otu oge ahụ ọ na-enye ndị ọrụ ohere enweghi ngwụcha ịnụ ụtọ telivishọn ha nke na-agaghị ekwe omume ọbụna iche n'echiche tupu ọbịbịa nke teknụzụ OLED. Echiche zuru ezu (Anya zuru ezu) na-ekwe nkwa nlele ọhụụ na nnukwu anụ ọhịa ma nwee ọdịiche zuru oke, omimi na eziokwu na, agbakwunyere ụda nke TV Akara Mbinye aka R, mee ka seta bụrụ ihe nlere anya nke ika ahụ na ikekwe ụdị ahịa ndị ọzọ chọrọ ịhọrọ iji teknụzụ a ma ọ bụ ihe yiri ya na TV ha.
Maka akụkụ ya, ọnọdụ linear na-ahapụ LG Signature OLED TV R akụkụ akpọrepu, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ nke ihuenyo zuru oke adịghị mkpa, dị ka ọ dị maka ịkpọtụrụ Lelee ma ọ bụ Oge ihe ọ na-eme, jikwaa ndị Ego na toda iji mepụta ọnọdụ izu ike karị; nche Foto ndi otu ezi na ulo ketara site na a smartphone, ma ọ bụ jụọ ọrụ ọ bụla nke Start Bar.
N’ikpeazụ mgbe emechiri ya nke ahụ apụtaghị na ọ kwụsịrị. Na nke a format, ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ music ma ọ bụ ndị ọzọ na ọdịyo ọdịnaya na kasị mma, ekele ya Dolby Atmos sistemụ 100W n'ihu yana ọwa 4.2. Ya adịchaghị imecha e mere site Danish emeputa Kvadrat eme ndị ọzọ na ga-n'ezie anya ikpọ ọ bụla na ndụ ụlọ.
O doro anya na dị ka ọtụtụ n'ime gị maraworị site na akụkọ sitere na CES, ugbu a ụlọ ọrụ a na ọtụtụ ndị ọzọ na-agbakwunye ohere iji AirPlay 2 n'ime ha, mana na nke a ụlọ ọrụ na-ekwu na ọ na-dakọtara na Apple si HomeKit. Kedu ihe ọ pụtara maka ndị ọrụ LG Akara Mbinye aka OLED TV R na-akwado airplay 2 na HomeKit? Dị nnọọ mfe, ha nwere ike igwu vidiyo site na iTunes, ma ọ bụ egwu, ma ọ bụ lelee foto ha ozugbo na ngwa ọ bụla na ngwaọrụ Apple ha. Na, n'ihi ndakọrịta ya na Apple HomeKit, ha nwekwara ike ijikwa LG TV site na iji ngwa Home ma ọ bụ site na ịjụ Siri.
N'oge ụlọ ọrụ ahụ anaghị enye data nke ụdị a dịka anyị kwuburu na anyị na-eche ịhụ uru nke ọmarịcha TV ọhụụ a, mana anyị chere na ọ gaghị adị ọnụ maka ọtụtụ n'ime anyị. Anyị ga-ahụ ụbọchị ntọhapụ na ọnụahịa gọọmentị n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ, ruo ugbu a ha gosipụtara ya na CES na Las Vegas.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » TV » LG weputara OLED TV nke mbu n’uwa
Ọnọdụ Martínez Palenzuela SAbino dijo
Olee uru ọ bụrụ ... ọ bụrụ na iwe wee gị, ị nwere ike ịtụgharịa ya ma were ya banye n’ọnụ ụlọ gị
Zaghachi na ọnọdụ Martínez Palenzuela SAbino
Acer na-eweghachi akwụkwọ ndetu egwuregwu egwuregwu na GeForce RT 900-onwem Predator Triton 2080